Zucchini र पनीर संग टमाटर खाना पकाउने
प्रत्येक तरकारी यसको आफ्नै तरिकामा उपयोगी छ र एक विशेष स्वाद छ। यो पबहरूमा बारेमा भने गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले भिटामिन ए मा धनी छन्, उत्कृष्ट एंटीओक्सिडेंट हो, यस्तो lutein, carotene, zeaxanthin मूल्यवान् पदार्थ समावेश गर्दछ। तिनीहरूलाई धन्यवाद, शरीर पहिले उमेर बढन कारण छ कि हानिकारक पदार्थ हटाउँदछ। zucchini पनि आहार उत्पादन मानिन्छ। तिनीहरूले धेरै कम क्यालोरी, कुनै बोसो र राम्रो पचा लिया जान्छ छन्। पक्ष व्यञ्जन, प्यानकेकहरू, casseroles, मिठाई मिठाईहरू, सूप र थप: स्क्वास व्यञ्जन एक किसिम ले तयार गर्न सकिन्छ।
हामी zucchini र पनीर संग टमाटर पकाउन गर्न प्रस्ताव। यो दुई मध्यम zucchini, तीन ठूलो र fleshy टमाटर, लसुन ल्वाड़, कुनै पनि आवश्यक हुनेछ पनीर प्रजातिहरू, frying लागि वनस्पति तेल, breading, नुन र स्वाद मरिच लागि पीठो। Zucchini एक सेन्टिमिटरले बाक्लो, नुन बारे स्लाइस मा कटौती र रस देखा तल एक सानो झूट दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईं सुनको खैरो सम्म पीठो र भुट्नु प्रत्येक रोल सर्कल गर्न आवश्यक छ। प्राप्त टमाटर। टमाटर संग Zucchini छुट्टी तालिकाको लागि सिद्ध पकवान र दैनिक जीवन, र यसैले लायक एक सानो प्रयास - र पनीर।
भुना स्क्वास क्लबहरू प्रत्येक सर्कल माथि zucchini टमाटर राख्नु, एक हत्येदार बरतन मा राखिएको हुनुपर्छ, मेयोनेज lubricates र लसुन रस संग छर्कियो। grated पनीर संग अन्त छर्कनु मा र ओवन मा राखे, एक सय र असी डिग्री, पन्ध्र मिनेट preheated। Zucchini, सुखा टमाटर संग, बाहिर धेरै रसदार र सन्तुष्ट नै समय मा बारी। पकवान साग संग सजाया गर्न सकिन्छ।
तपाईं हट को रूप मा zucchini र पनीर संग टमाटर पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, को zucchini, टमाटर, प्याज, सलगम घन काट्नु। एक हत्येदार बरतन एक सानो वनस्पति तेल खन्याउन र हाम्रो तरकारी फैलियो। बीस-पाँच कोमल सम्म - बीस मिनेट को लागि Simmer। एक प्लेट मा फैलियो। तिमी, खट्टे क्रीम र लसुन सस वा घर मेयोनेज खन्याउन सक्नुहुन्छ grated पनीर संग छिडकना र केही कटा साग थप्नुहोस्।
राम्रो टमाटर courgettes र पनीर फारममा तातो स्यान्डविच को। Sauteed zucchini स्लाइस कट मेयोनेज संग गंदा, आवारागर्दी ~ को टुक्रा मा राख्नु। Courgettes, मेयोनेज को पातलो तह thinly कटा टमाटर सर्कल को शीर्ष मा राखिएको संग fluff। grated पनीर संग छिडकना र तीन मिनेट लागि माइक्रोवेव मा राखे। एक प्लेट मा स्यान्डविच संग राखे, तपाईं साग को एक sprig संग सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ।
यो garnish एउटा पूरक रूपमा टमाटर courgettes र पनीर तयार गर्न सम्भव पनि छ। उदाहरणका लागि, आलु, पास्ता, चामल उसिनेर। कोमल सम्म स्क्वास जोश। एक सस गठन गर्ने एक कराइ मा टमाटर बाहिर राखे। एक ब्लेंडर वा दबाउन tolkushkoy मा Zucchini ब्रेक। परिणामस्वरूप ठूलो टमाटर, नुन र मरिच थप्न र दस मिनेट simmer छ। एक प्लेट राख्न मसले आलु वा पास्ता कम स्लाइड मा। एक खाजा स्क्वास संग कवर र grated पनीर संग सबै छिडकना। तपाईं डिल र साग संग सजाउनु र मेयोनेज वा खट्टा क्रीम थप्न सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो तातो सेवा गर्छन्। तपाईंले यो स्क्वास खाजा grated गाजर थप्न सक्नुहुन्छ। हुनेछ कावीयार स्क्वास। यस्तो राम्रो कावीयार वा चिसो, र एक हट पकवान एक थपिएको छ।
यो जाडो लागि स्क्वास स्थिर गर्न सम्भव छ?
स्वादिष्ट केक हावा कसरी खाना पकाउनु?
"Betahistine": प्रयोग, विशेषताहरु र सङ्केत गर्छ लागि निर्देशन
Svitshot के छ र के लगाउन?
मोटरसाइकल "चांग-यांग" 750: चिनियाँ "यूराल" को रहस्य dispelling
ब्राजील खनिज र भू-भाग सुविधाहरू
को दराज मा एक आधारभूत वस्तु रूपमा ट्वीड ज्याकेट
दर्शन को कार्य
Emma Watson चलचित्र "सौन्दर्य र जनावर" फिलिम लागि $ 15 लाख प्राप्त गर्नेछ